Crunch Nguva YePatato Chips Vagadziri SeEU Waste Target Tarisiro - Potatoes News
European Commission yakaisa chinangwa cheEU-chakapamhama chekuti mapakeji ese agone kugadziriswazve kana kushandiswazve na2030.
Asi machipisi emabhegi (crisp mapaketi) ndiwo mamwe misoro yevagadziri uye indasitiri yekudzokorora nekuti idiki uye haina kureruka.
Walkers, mugadziri mukuru weBritain, yakaziviswa muna Gumiguru yanga ichitangisa chirongwa chekugadzirisa zvakare mazana manomwe emakumi mapaketi asingadzorekezve ayo anogadzira mineti yega yega. Zvichakadaro, iyo yekudzokorodza scheme - iyo inogamuchira ese mabrandi echips kurongedza - yatanga uye iri kushanda.
Chiziviso ichi chakaitwa mushure mekunge Pepsico Subsidiary yauya pasi pekumanikidzwa kwakanyanya kubva kumazana evaratidziri vakabata misoro nekutumira mapaketi avo ku Walkers.
Asi kuzadzisa yakakwira yekudzokorodza mitengo ichave yakareba chirevo cheVafambi. Chokwadi, mapaketi akajeka akareruka zvekuti hapana kukosha chaiko kunyangwe mukuaunganidza kuti agadzirise zvakare, akadaro Delphine Lévi Alvarès, anobva kuRethink Plastic Alliance, boka remasangano ezvematongerwo enyika.
Delphine Lévi Alvarès, anobva kuRethink Plastic Alliance:
"Inogona kunge ichishandiswazve asi haisi kuzodzokororwazve."
"Kurerutsa mwenje kwagara kuchiuya tichiregeredza uye kugadzirisazve."
Aya ndiwo mabwe emakona ehupfumi hwedenderedzwa, akatsanangura.
Vanogadzirisazve vanonyatsoziva izvi uye vamwe vakashandura marongero avo ekugadzirisa zvinhu zvidiki, zvisina kureruka. Nekudaro, ivo havana kuwana mhinduro yehupfumi-inoshanda zvakadaro.
Bénédicte Wallez anobva kuVeolia, kambani yeFrance inobata mukugadzirisa marara:
“Mapurasitiki akareruka zvechokwadi anonetsa kudzokorora. "Hatina zvinokurudzira uye, nehunyanzvi, zvakaoma kupatsanura linings dzakasiyana."
zvekuEurope Snacks Association uye EU nyaya dzeBrussels-based media Euractiv yakaronga musangano wevatori vechikamu wakanzi Chikafu kurongedza uye nharaunda: Kunopera kupera kwekushandisa kamwe chete.
Kubheja pazvinhu zvitsva
Chips kurongedza kunoitwa kubva mukubatanidzwa kwepurasitiki nealuminium pepi. Chips dzakapakirwa seizvi nekuda kwemafuta avo akawandisa, zvinoreva kuti vanogona kukurumidza kuenda rancid kana vaoneswa kune oxygen.
Pakazosvika gore ra2030, "tinotarisira kuti hunyanzvi huchave hwakagadzirwa" kuve nechokwadi chekuti zvinhu zvepurasitiki zvinoshandiswa-kamwe chete kusanganisira mapaketi akasvinuka anogona kuunganidzwa uye kugadziriswazve, akadaro Leonardo Mazza, mukuru weEU anoona nezvehurongwa hwemarara kuEuropean Commission nharaunda. .
Asi pachine "kuyedza kwakawanda kuita" mukati mekutengeswa kwepurasitiki uye pakati pevamiriri veveruzhinji vanotarisira kuunganidzwa kwemarara kuitira kuti chiono ichi chive chokwadi, akaudza vatori vechikamu pachiitiko ichi, vachitsigirwa neEuropean Snacks Association.
Vagadziri vemapurasitiki akareruka vanoti vanogona kuita kuti basa revanozvigadzira patsva rive nyore nekugadzira mapaketi akagwinya kuti agadzirisezve. Kuwedzera kudyara mukuunganidza uye kugadzirisa maitiro kunowedzera mukana wekushandisa zvakare, vanopokana.
Achim Grefenstein, mutevedzeri wemutevedzeri wemutungamiri wenyika kuConstantia Flexibles, anogadzira zvigadziriso zvakapakata dzimbahwe riri muVienna, Austria:
"Kune matekinoroji anonakidza ekuti zvishandiswezve pasi pevagadziri."
"Varidzi vemakambani vanowanzotibvunza kana tichigona kugadzira zvigadzirwa zvine zvishandiswazve" kana zvigadziriswazve zvezvigadzirwa zvakagadzirwa kubva mukurima. "
"Asi nhasi hazvigoneke neunyanzvi hwechizvino-zvino hwekushandisa marara."
"Sei uchienda kune 'Holy Grail' yekushandisa patsva asi mapurasitiki akareruka anomiririra 1% chete yekushandisa kwepurasitiki?"
"Ndinofunga ipapo, kunyange kupisa kuri nani."
Vagadziri vakatsvaga kutsvaga nekugadzira dzimwe nzira senge mapurasitiki-emichero senzira yekuvandudza tsoka yezvinhu zvakapfava.
"Biopolymers dzinogona kubatsira kubvisa kuvimba nemafuta."
"Ndidzo sarudzo dzakakosha mune ramangwana."
Nekudaro, akayambira kuti zvinhu zvakadaro hazvikanganisike uye nekudaro hazvigadzirise dambudziko rekurasa marara. Achim Grefenstein:
"Nhasi, hapana kana biopolymer imwechete inogona kudzikisira mugungwa."
“Mazhinji biopolymers anongodzikisira mumiti yekugadzira manyowa. Uye nekudaro, iwe unoda system yekuunganidza zvakadaro. ”
Anowedzera izvi hazvizovi mhinduro kumisika irikubuda muAsia uko kurasa marara kuri kunetsa veruzhinji.
"Handifari kutaura izvozvo, asi ichokwadi chinosuruvarisa."
Muchokwadi, varatidziri vegirinhi vanofungidzira nezve mapurasitiki-emichero.
"Izvi handizvo zvatiri kukurudzira."
"Vagadziri vemitemo veEU vapinda mumusungo wekutsiva marara."
Kungofanana nezvimwe zvirimwa zvekurima, mapurasitiki anodyara-miti anoda fetiraiza, mvura uye mishonga yekuuraya zvipuka kuti zvikure, Alvarès akataura, achinyevera izvi zvinongodzora kukanganisa kwezvakatipoteredza nekusvibisa kwepurasitiki munzvimbo yezvekurima. Kumwe kunetsekana ndekwekuti bio-mapurasitiki anogona kutungamira kuwanda kwemarara nekuti vanhu vanofungidzira kuti chigadzirwa hachina kushatiswa uye nekudaro vanorasa kure nyore.
Break Break Kubva kuPurasitiki kufamba, mubatanidzwa weNGO, waita chiratidzo chekuongorora marara epurasitiki anowanzo kuwanikwa mumahombekombe pasirese. Yakawana kuti Coca-Cola, PepsiCo, uye Nestlé ndiwo matatu marondedzero anonyanya kuzivikanwa, aine kusvibiswa kwepurasitiki kweCoke kunowanikwa mune makumi mana emakumi mana nenyika dziri kutora chikamu.
Vagadziri vezvekudya vakanangisa kuyedza kwavo pamishandirapamwe yevatengi, vachiti vanogona kutora nzira refu yekudzivirira marara.
Sebastian Emig weEuropean Snacks Association:
"Kurongedza kwepurasitiki idambudziko, isu tese tinozviziva."
"Zvisinei, kurongedza kunoita basa rakakosha kuchengetedza chikafu kubva mukusakara kana kusviba."
"Saka zvakare mubvunzo nezvekurasa chikafu."
Emig akataura kuti kurongedza kunovimbisawo kuchengetedzeka uye mhando yechikafu.
"Hatifanirwe kukanganwa mutengi."
Emig akati chinhu ichi chinofanirwa kugadziriswa nemisangano yekudzidzisa uye padanho remunharaunda, nekutsigira kutorwa kwemarara uye zvirongwa zvekurapa.
Muna Kukadzi gore rapfuura, Coca-Cola yakazivisa chirongwa chayo cheNyika Pasina Waste, nekuzvipira kushandisa chete mapurasitiki anogona kugadziriswazve mumabhodhoro awo muna2025. Pakazosvika 2030, avhareji ye50% yemabhodhoro eCoca-Cola anozogadzirwa kubva muzvinhu zvakashandiswazve.
Asi varatidziri vanoti marangi anofanirwa kutarisa kupfuura kupaka uye otarisa pane chigadzirwa panzvimbo
"Hausi kutengesa kurongedza, urikutengesa zvigadzirwa - chikafu, matoyi, nezvimwe."
"Chigadzirwa ndicho chakakosha, kwete chiputira chakakomberedza."
Nhau dzakanaka, akadaro, ndedzekuti kune dzimwe nzira senge mashopu asingabhadharwe, ayo ave kuve nemukurumbira uyezve anotengesa chikafu chine hutano, chinogadzirwa muno.
"Dzimwe nzira dziri kunze uko uye vanhu vari kuzvibvunza."
Akadana mabrand nevatengi kuti vafungisise maitiro avo ekurongedza.
Tags: MachipisiYakatetepa & Crispy mbatatisi machipisi
Kupisa kwakanyanya & nemhepo- Mbatatisi dzaBarretts - chirimwa chekuvhara
Kubudirira kutangazve kweDLG yekutengeserana kwepasi rese
Mbatata yeBologna - tembiricha yakakwira uye kudiridza kuri kuenderera
NPPL varimi: mhedzisiro yemvura nyoro inosiyana zvakanyanya izvozvi
Aldi anoyeuka batch yeClancy's Wavy Potato Chips nekuda kwekunyora zvisizvo (wemukaka chigadziro chisina kunyorwa)
2 makore apfuura
Kutumira kwembesa yembeu mbatatisi yakapotsa yapera: 29 muzana yakadzikiswa mukirasi